Iwo akanakisa ekuzivisa ekutaura maturusi eLinux | Linux Vakapindwa muropa
Izwi riri kuramba richishandiswa kudyidzana nemidziyo yedu, pamusoro pekuve ndiyo yega nzira yeavo vanoda iyi nzira yekuwanika nzira. Chero zvazvingaitika, zvinonyatsogadzikana kutaura kuti utumire mameseji kana kungoisa mirairo yezwi mumasisitimu edu kuitira kuti vaite rumwe rudzi rwekushandisa vasina kushandisa maoko avo. Dambudziko nderekuti kuzivikanwa kwezwi iwo akavakirwa painjini dzinoshandisa masvomhu algorithms kuziva kutaura uye haasi 100% akavimbika.
Kufambira mberi kwetekinoroji kuri kuwedzera kuunza iyo kuvimbika kusvika pakukwana, nehungwaru hwekunyepedzera uye makuru masisitimu edhata ari kubatsirawo zvakanyanya kugadzirisa zvirongwa zvekuziva kutaura zvakanyanya. Munguva pfupi yapfuura kuyedza kwakawanda kuri kuiswa kuvandudza masisitimu aya kusvika pakakwirira, uye zvidzidzo zvakawanda zviri kutarisa pazviri kugadzirisa kudzora uye kuvaita iwo maratidziro emangwana. Ramba uchifunga kuti izvo zvazvino mafekitori haana kusarudzika kune vanhu uye asinganyanye kukurumidza kupfuura izwi.
Sisitimu yekuziva izwi ichave iine kukosha kwemamirioni gumi emadhora mumakore anotevera uye ndosaka makambani makuru ari kutarisa kukura kwevabatsiri vakaita saApple Siri, Microsoft Cortana kana Mycroft yeLinux, pamusoro pekuwedzera kuwedzera kuve mukurumbira uye kazhinji zvigadzirwa zvakaita seAmazon Echo, Google Imba, kana Apple HomePod yemba, pamwe nekubatanidza yakaomesesa mazwi ekuzivisa masisitimu mumotokari dzakabatana.
Izvozvo zvakati, yedu runyorwa rwekushandisa ekuzivisa maturusi eLinux Ndizvo:
Julius: isimba ine simba inoenderera yekuziva injini ine mazwi mazhinji.
Dzidziso Yakadzika: ndeye TensorFLow kuitiswa kweBaidu's DeepSpeech architecture.
Simon: isingachinjiki kutaura kwekuziva software.
kaldi: ndeye C ++ dhizaini yekushandisa yekutsvaga kwekutsvaga kwekutaura.
CMUSphinx: mune ino iri injini yekuziva izwi kune nharembozha uye maseva.
deepspeech.python: iko kuiswa kweDepsiPeech nePython uye kushandisa Baidu Warp-CTC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iwo akanakisa ekuzivisa ekushandisa maturusi eLinux
Yakanaka kwazvo, uye pachave neese akanaka TTS (chinyorwa kune kutaura) kune linux?
MuWindows neAroid mune mazwi akanaka kwazvo akadai saLoquendo, Ivona kana NeoSpeech, asi haasi eLinux. PaLinux ndakaedza iyo mbrola uye picoTTS manzwi asi iwo ane robotic chaizvo.
Cepstral inopa yemahara Alejandra izwi re linux iro rakanaka, asi ini ndaisaziva kuti ndoriisa sei.
Ini ndinofamba zvakafanana kana iwe ukawana mugove wakanaka
Iwe unogona kushandisa loquendo newaini pane linux. Ndinokurudzira iyi vhidhiyo ...
Ndakaedza kuisa mubatsiri, ndinoreva, Google Assistant uye handina kukwanisa, ndakagara muchikamu cherejista faira, ndinofunga inodaidzwa. Zvakaipa Alexa ndeye crap ...
Iyo espeak chirongwa chinoshanda pane iyo debian apt kuisa espeak koni. Uye ubatanidze semuenzaniso espeak -ves «Hello World»
iyo -ves is v = manzwi is = Spanish
Une sarudzo dzakawanda dzekuverenga chinyorwa faira, nyora mhedzisiro kune wav faira.
chokwadi chakashata kwazvo, windows iyo ndeimwe nyika ... heino makore gumi kumashure
Uye 3 makore gare gare, hongu! izvi zvichiri kunonoka.